१८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि ४० लाख मोडेर्ना खोपको सुनिश्चित, कहिले आउँदैछ? - Naya Aawaj
४ असोज । सरकारले १८ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने ४० लाख डोज कोरोना खोप खरिद गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डा. सागर दाहालले अमेरिकी कम्पनी ‘मोडेर्ना’ लाई खरिद सम्झौता गरिएको खोपको पैसा पनि पठाइसकिएको बताए। ‘हामीले खोपको पैसा पठाइसकेका छौं। अब उहाँहरूले कहिले खोप पठाउनुहुन्छ त्यो अहिले नै खुलिसकेको छैन,’ उनले भने। सम्झौता गरे अनुसार कम्पनीले सन् २०२१ को अन्तिमसम्म वा २०२२ को पहिलो महिनासम्मा पठाउन सक्ने भनिएको छ। यद्यपि तोकिएको समयभन्दा चाँडो खोप ल्याउनलाई कम्पनीसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको दाहाल बताउँछन्।१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने यो खोप ‘कोभ्याक्स’ अन्तर्गतको ‘कस्ट सेयरिङ’ मार्फत सरकारले ल्याउन लागेको हो। सोही अनुसार नेपालले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा खोपको पैसा पठाइएको दाहालले बताए।
सोही उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप खरिद गर्न ‘फाइजर’ कम्पनीसँग पनि कुराकानी भइरहेको प्रमुख दाहालले जनाए। सरकारले सुरुमा यो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ‘फाइजर’ को खोप दिने भनेको थियो। तर फाइजरसँग खोप खरिद गर्ने कुरा चाँडो टुंगो नलागेपछि अहिले ‘मोडेर्ना’ ल्याउने सम्झौता गरिएको हो।
विज्ञहरूले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छिटो खोप प्रदान गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय देशभर विद्यालय खोल्ने कार्य सुरु भएको भन्दै १८ वर्ष मुनिका बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले ती समूहलाई खोप प्रदान गर्न भनिएको हो।